Turkiga:- Madaxweynaha Turkiga oo sheegay in ciidamadiisu ay goor dhow gacanta ku dhigi doonaan magaalada Afrin ee waqooyiga Siiriya.
Thursday June, 21 2018 - 05:24:22
Saturday March 10, 2018 - 07:45:54 in by salman abdi
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa sheegay in ciidamadiisu ay goor dhow gali doonaan magaalada Afrin ee waqooyiga Siiriya in ka yar laba bilood ka dib markii xukuumada Ankara ay bilowday duulaanka ka dhanka ah kooxaha xagjirka ee Kurdida (YPG).
Hogaamiyaha Turkiga ayaa u sheegay xisbiga haya talada dalka, maalin ka dib markii askarta ciidamada Turkiga ay gacanta ku dhigeen magaalada istaraatiijiga ah ee Jandairis ee galbeedka Afrin inuu hadafkoodu yahay Afrin ... Ilaa iyo hada, waxaana ilinka u joognaa Afrin. "Waxaana qabsan doona Afrin , Ilaahay haduu yiraahdo," ayuu yiri Erdogan.
"Hawlgallada Afrin ayaa sii socon doona illaa iyo inta laga nadiifinayo kooxaha argagixisada," ayuu Erdogan ku nuuxnuuxsaday.
Hadalka madaxweynaha Turkiga ayaa muujineysa kalsoonida sii kordheysa ee dalka ee ku aaddan howlgalkeeda milatari ee ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah ee Kurdiyiinta ee gobolka Afrin iyo in si guul leh ay ku soo afjaraan 50 maalmood ka dib dagaal xooggan.